Shirkii Kismaayo oo maanta looga hadlidoono ajendaha la isugu yimid. – RadioQandala.com
Shirkii Kismaayo oo maanta looga hadlidoono ajendaha la isugu yimid.
Posted on 9 October, 2017 by RadioQandala
Waxaa saakay magaalada Kismaayo ka furmay shirkii dowladdaha xubnaha dowladda federalka Soomaaliya, kaasoo uu gogashiisa dhigay madaxweyne Axmed Madoobe.
Masuuliyiinta ayaa maanta si qoto dheer uga hadlidoono shirka wada tashiga oo si gaar ah diirada loogu saarayo sidii Soomaaliya dhabe wanaagsan ay u qaadi lahayd oo ah nabad iyo wax wada qabsi islamarkaana meesha laga saaro khilaafka siyaasadeed ee haatan taagan.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Jubbaland, Maxamed Warsame Darwiish ayaa sheegay in waxa kasoo baxa shirkani loo gudbin doono dowladda dhexe ee federaalka, waxaana uu intaa ku daray in natiijada laga fili karo shirkani ay tahay guul, midnimo iyo in Soomaalida ay gartaan danahooda.
Madaxweynaha dowladda Puntland, Cabdiweli Gaas ayaa sheegay in loo baahan yahayin si sax ah loo dhaqan geliyo xeerarka fadaraalisam ka madaama uu dalka ka jiro Fadaraalisamku, isla mar’ahaantaana waxa uu cadeeyey Madaxweynuhu in ay laga maarmaan tahay in laga tashto wax walba oo qaldan haka qal danaadeen DFS ama dawalddaha xubnaha ka ah DFS.
Lama garanayo inta uu shirkaan socondoono
« KHASAARIHII DAGAALKII XALAY EE BOSASO
Faysal C.Waraabe oo yiri waxaan rabnaa Somaliweyn intii aan Dagaalkii1994 nalagu celin lahaa dhagayso »